ဦးဘအို | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ASEAN NGOs Urge Myanmar Leaders To Solve Violence Against Rohingya
Human Rights Watch ရဲ့ အထောက်အထားများ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများနဲ့ အစီရင်ခံစာ »
Source: Aung Tin
ဖခင်ကြီးသည် ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပို့ခံရသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီပြည့်ရှင် ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီး ဇဖရ်ရှားနှင့်အတူ ပါရှိလာသည့် အမတ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူဌေးကြီးသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ စိန့်ပေါကျောင်း၊ ကန်တော်ကြီး မွတ်စလင်မ် အထက်တန်းကျောင်း၊ ဘိုင်မြား အထက်တန်းကျောင်း၊ မော်လမြိုင်မွတ်စလင်မ်ကျောင်း၊ သူနာပြုဆေးရုံ၊ သားဖွားရုံ၊ အရေပြားရောဂါကုဆေးရုံ၊ လေလွင့်ကလေးများဂေဟာ၊(The home for Warfs and Strays) အိုရီယင့်ကလပ်နှင့်ဇရပ်၊ တန်ဆောင်း၊ ကန်၊ ကျောင်း၊ ဗလီ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန် ကဗရ်စတန်သုဿာန် စသည်တို့အတွက် စေတနာသဒ္ဓါထက်သန်စွာ လှူဒါန်းသည်။
This entry was posted on August 3, 2012 at 3:31 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.